ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တွေကို နေရာမပေးတဲ့ ရုပ်ရှင်လောကအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေး
အဆိုတော်၊ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးလက်ခံခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ယုန်လေးကတော့ စိတ်ထားကောင်ပြီး အားနည်းသူကို ကူညီတတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ယုန်လေးက ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ခက်ခဲတဲ့ ဘဝတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် သူရွယ်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ယုန်လေးကတော့ စိတ်ရင်းကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို ချို့တဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ချို့ကို အမြဲကူညီလေ့ရှိသူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဇာတ်ပို့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကို ပြေလည်ဖို့ သူစီစဉ်ထားတာတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ယုန်လေးရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယုန်လေးကတော့ “ကျွန်တော် မြင်တာလေးတစ်ခုပါ မှားရင်လည်း မှားနိုင်ပါတယ် . ကျွန်တော် အမြင်ပါ . ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ပို့လို့ ခေါ်ကျတယ် .ကျွန်တော်ကတော့ ၁၆ . ၁၇ Lighting Festival ကြေညာမှာတောင် ဇာတ်ပို့များ အဖွဲ့လို့ မပြောချင်ဘူး Roll တစ်ဆင့်ခွဲလိုက်သလို ဖြစ်မှာဆိုးလို့ .အကုန်လုံးကို ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မလို ချစ်တာကို အခု ကိုဇော်အောင် ပေးလိုက်တဲ့ နာမည်လေး မိုက်ပါတယ် ဘီးကျဲ များအဖွဲ့ . . . တကယ်ပြောချင်တာက ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ပို့ ဘာလို့ဖြစ်လဲ ဘာနေရာမှမပေးလို့ . အရင်ဗီဒီယို ခေတ်တွေမှာ .တစ်ချို့ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ စဉ်းစားပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွန်း သမား ဒါရိုက်တာ မရှိသလောက်ရှား ။ မင်းသားနောက်လိုက် မင်းသမီးနောက်လိုက် ဝင်ယောင် . ဒါတွေကြီးပဲ ပေးတာ သူတို့ ကို ထပ်လည်း မစဉ်းစားပေး ဘယ်သူ့ကိုခေါ်လိုက်ခြောက်ကွာ . . နင်ကတော့ ရပ်ကွပ်ထဲမှာ အတင်းပြော ဒါပဲ ဒါပဲ ဒါတွေကြီးပဲ မှာ အဲ့ဇာတ်ပို့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သော ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများ ဘာလုပ်ပိုငခွင့်မှာမရှိ ဒါလေးတော့ မလုပ်ချင်လို့ တခြား ဇာတ်ကောင်လေးပေးလုပ်ပါလားဆရာလို့ . မပြောရဲဘူးပြောရဲလို့ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ လူတွေလည်းရှိပါတယ် ။.နောက်ရူတင်မပါတော့ဘူး အလုပ်မရတော့ဘူး သူတို့အတွက် . အမှတ်တစား မရှိဘူး ။
သူတို့အတွက် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ မက်လောက်စရာမရှိတဲ့နေရာကို ဝမ်းရေးအတွက် သည်းခံပြီး ရိုက်ခဲ့ရသူတွေ တော်တော်များများပါ။ ရူတင်မန်နေဂျာက အစ ကြောက်တာမဟုတ်ပေမယ့် ထည့်တွက်နေရတာတွေ . . . Fast & Furious .Vin Disel . The Rock . Paul Walker Ham . Ludacris . တခြားပါဝင်သူ အကုန်လည်း အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေကြီးပဲ ဇာတ်ပို့ မှ မရှိတာ Avengers မှာလည်း အကုန် အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေပဲလေ ဇာတ်လမ်း တစ်ခုမှာ လည်းမျှတဖို့လိုတယ် .ဒီ Plot မှာ မင်းသားတွေ မင်းသမီးတွေ နာမည်တွေ ဘေးချိတ်ထား . ဇာတ်ပို့ပါဆိုတဲ့ လူရဲ့ Plot ဖြစ်နေရင် နာမည်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဘာDi မှ ပြောခွင့်မရပဲ . သူတို့ကိုပြန်ပို့ပေးရမှာပဲ . ဒါရိုက်တာကလည်းပေးရဲရမှာပေါ့ . အဲ့လို ပါဝင်တဲ့ သူတိုင်းကို တန်ဖိုးထားချင်းက ကိုယ့်ကား တန်ဖို့တက်လာတာပါ။ အခုက တော့ ရုပ်ရှင်ခေတ်ပြောင်းသွားပါပြီ ။ ဇာတ်ကား တကာမှ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တိုင်းက အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေကြီးပဲ ပါဝင်သူတိုင်းနေရာခိုင်ခိုင်မာမာ ရမှ အားပေးကျမှာ . အဲ့လိုကျပြန်တော့လည်း အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေကြီးပဲ ဇာတ်လမ်းတွေ ပုံဖော်လာတော့လည်း ဇာတ်ပို့တွေ အတွက် သနားစရာ နေရာ မရြှိပန်ဘူး .ဒီနေရာလေး ဘယ်သူထည့်လိုက်ပါလား ။မထည့်တော့ဘူး လုပ်ကွက်ရနေတာ သူမထည့်နဲ့တော့လေ မင်းသားအသစ် မင်းသမီးအသစ် Model . ဒါတွေ ထည့်ကျပြန်ရော . အသစ်တွေကို နေရာပေးတာ ကောင်းပါတယ် ။ ဇာတ်ပို့ဆိုတဲ့ နာမည်တက်ခံရတဲ့ လူတွေဘက်က ခဏ ဝင်ကြည့်ကြည့်မိပြီး ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ကိုရေးတာပါ။ သူတိုမှာရှိတဲ့သရုပ်ဆောင် အတွေ့အကြုံ ဆိုတာလည်း အလကားမှ မဟုတ်တာ . နှစ်ပေါင်းများစွာ ရူတင်ထမင်းပဲလိုက်စားနေတဲ့ လူတွေမှ မဟုတ်တာ ။သူတို့မှာ ရူးသွတ်တဲ့ စိတ်ရှိလို့ ဒီလောကထဲ ဒုက္ခပေါင်းများစွာ ကိုဖြတ်သန်းလာတာပါ။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရင် လုပ်နိုင်တဲ့လူ လုပ်ပြချင်တဲ့လူတွေ လုပ်ဖို့အခွင့်ရေးအပေးခံရမှာကို မျော်လင့်တကြီး စောင့်နေတဲ့ လူတွေကြီးပါပဲ ။ အတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေကို သုံးရင် လိုအပ်တဲ့ အိုက်တင် လိုချင်တဲ့အိုက်တင်ကို ဂိုက်လိုင်းချပေးယုံပဲလေ . ပိုအသုံးဝင်ပါတယ် အတွေ့ကြုံကလည်း လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ ။ အရင်တိုင်းတော့မရဘူးလေ။ကိုးလုက်ရမယ့် ဇာတ်ကောင်ကို အပြီပြင်ဆင်ရမှာပေါ့။ဇာတ်ပို့ပါဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ မထင်ထားတဲ့ ကြိုးစားမူ့ သူတို့ပါဝင်ရမယ့်ဇာတ်ကောင်အပေါ် ပံပိုးမူ့တွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ။ ယုံကြည်ပါတယ် ခေတ်ပြောင်းသွားတဲ့ အတွက်ဒီကားတော့ ၄ရက် . ဟိုကားကတော့ ၅ရက် ဟိုမှာတော့ တစ်ရက် အရင်လိုပဲ နာမည်အတက်ခံထားရတဲ့ ဇာတ်ပို့ဘဝလိုပဲနေမယ် မပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင်တော့ဇာတ်ပို့ပဲ ဆက်ဖြစ်နေမှာပါ ။ ပြင်ဆင်ချင်တဲ့လူ အနုပညာပဲ ပိုလုပ်ပြချင်တဲ့ လူတွေကိုလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိစေချင်ပါပြီ ။အနုပညာ နဲ့ ပိုက်ဆံရှာဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။အနုပညာအတွက် ပေးဆပ်ရမယ် စိတ်တကယ်ထည့်မှဖြစ်လာနိုင်မယ့် အချိန်တွေပါ။ကိုခင်လှိူင်ကိုတော့ အရမ်းအားကျတယ် ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို နောက်ဆုံး အစီစဉ်တင်ဆက်သူလုပ်မှာ အစ သူများနဲ့ မတူတဲ့ ပြင်ဆင်မူ့ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ခင်လိူင်ဆိုပြီး ဖြစ်တာကို အရူးကြီး 🤣🥰အဲ့အတွက် ကျွန်တော်ချစ်သော ဘီးကျဲများ ကိုကို မမ များ ကျွန်တော်လည်းကူလို့ရတဲ့ ဘက်က ကူပါ့မယ် ။ အတွေ့ကြုံရှိပြီးသား လူတွေကို ဟောင်းနေလို့ မပြစ်ထားပဲ သူတို့ရှိတဲ့ အရေသွေးလေးတွေကို ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးUpdate လုပ်ကြည့်ကျရအောင်ဗျာ ။ဆန်းသစ်မူ့တွေတော့ ဖြစ်လာမှာပါအားလုံး Peace . . . 🥰🥰🥰 ” ဆိုပြီး ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပြောထားတာပါ။
ချစ်ပရိသတ်တွေရော ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တွေကို ထပ်တလဲလဲနေရာတွေမှာမဟုတ်ပဲ တကယ့်လုပ်ကွက်ရှိတဲ့ အခန်းတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခိုင်းဖို့ သူကိုယ်တိုင် စတင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ယုန်လေးရဲ့စိတ်ဓါတ်လေးကို သဘောကျရင် Share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Song-Song စုံတွဲ အတူတွဲဖက်ပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာ ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းများထွက်ပေါ်နေ
လေးတန်းနှစ်တည်းက ကွဲကွာသွားတဲ့ ဖခင်နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ပြန်ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင် ထက်အဉ္စလီ
စကားတတ်တဲ့ သားလေး ရွှေပိုင်ရဲ့ ဖေဖေ့အကြောင်း ကဗျာလေးကြောင့် မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတဲ့ ဇော်ပိုင်